Macaamiisha Elektaroniga - Pandawill Technology Co., Ltd.
Macaamiisha elektarooniga ah, laga bilaabo alaabada maqalka ah ee la gashado, ciyaaraha ama xitaa xaqiiqda dalwaddii, dhammaantood way sii kordhayaan. Dunida dhijitaalka ah ee aan ku nool nahay waxay u baahan tahay xiriir heer sare ah iyo koronto sare iyo awoodo, xitaa alaabada ugu fudud, awood siinta isticmaaleyaasha adduunka oo dhan.
At Pandawill, waxaan ku bixinnaa xalalka wax soo saarka elektarooniga ah ee dhamaadka elektaroonigga macaamiisha, laga bilaabo naqshadeynta, injineernimada, iyo tusaalooyinka, illaa wax soo saar ballaaran iyo xalal nolol-soo-saarka dhammaadka-dhamaadka ah.
Maaddaama aan nahay shirkad wax soo saar qandaraas elektiroonig ah, waxaan bixinnaa adeegyo furfuran oo buuxa oo laga helo adeegyada naqshadeynta si loogu beddelo injineernimada iyo maareynta gabowga Dhiirrigelinta qaybaha saxda ah iyo hubinta inay dhammaantood isku mid noqdaan si ku saleysan shuruudahaaga, waa khibradeena asaasiga ah.
Naqshadeynta, injineernimada, tusaalooyinka, iskuxirka guddiga wareegga daabacan (PCBA), soo bandhigida wax soo saar cusub (adeegyada NPI), xalka silsiladaha saadka ee caqliga, maareynta hantida caqliga… Waxaan siineynaa adeegyo ballaaran macaamiisheena.
Awoodeena casriga ah, oo ay weheliso shabakadeena doorbideysa ee alaab-qeybiyeyaasha, waxay naga dhigeysaa lammaane si aan ugu sii gudubno xalka hufan ee hal-joogsiga ah ee ka imanaya soosaarida wax soosaarka ballaaran iyo xalalka nolosha ee dhamaadka iyo dhamaadka.
Adeeg bixiyaha wax soo saarka elektarooniga ah ee Macaamiisha Elektaroniga, awooddeena waxaa ka mid ah:
• Qalabka maqalka iyo nidaamyada
• Qalabka caafimaadka ee macaamiisha
• Qalabka Multimedia iyo qalabka
• Tiknoolajiyada waxbarashada